Shina: Mitohy Ny Fifidianana Ao Wukan Ary Mampangetaheta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2012 7:16 GMT
Ireo mponina ao an-tananan'i Guangdong ao Wukan, izay nitarika fihetsiketsehana tamin'ny taona lasa hanoherana ireo manampahefana ao an-toerana noho ny fangalàna ny tany famokaran-dry zareo sy ny kolikoly, dia nandray dingana iray fanalahidy mankamin'ny demaokrasia tany ampiandohan'ity volana ity niaraka tamin'ny fifidianana malalaka ireo izay ho mpitondra ny tananan-dry zareo.
Maherin'ny 6.000 ireo mponina ao Wukan no nandeha nifidy tamin'ny fifidianana natao ny 11 Febroary an'ireo izay ho solontena vavaon'ny tananany, dingana faharoa amin'ireo telo izay efa nanomboka ny 1 Febroary niaraka tamin'ny nifidianana izay ho ao amin'ny komity tsy miankina hanara-maso ny fifidianana. Ny dingana fahatelo, hatao ny 1 Martsa, dia hifidianana izay ho komity vaovaon'ny vohitra izay hitoetra eo ambany fanaraha-mason'ireo solotenam-bahoaka 107 lany tamin'ny dingana faharoa, ka ao anatin'izany ny zanakavavin'ilay solontenan'ny vohitra teo aloha efa nodimandry, Xue Jinbo.
Xiong Wei, mpanangana ny Beijing New Enlightenment Research Centre sy mpikaroka iray avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking, dia nanazava ilay fifidianana ao amin'ny Sina Weibo:
Ny 11 Febroary, nifamory hanangana vondron'olona ireo mponina tao am-bohitra ka ireo vondrona tsirairay dia nifidy ny solotenan-dry zareo tamin'ny fomba hoe ‘olona iray, vato iray’. Ireo solotenam-bondrona avy eo no mitambatra ho komity solotenan'ny vohitra, izay hanjary ho manampahefan'ny tananan'i Wukan.
Wukan dia mbola an-dalam-pikarohana hatrany izay ho lasitry ny fizakantenany sy mametraka ny fahefana vaovao mba ho tsindrin'entam-pahefan'ireo tompon'andraikitra vaovaon'ny tanàna. Mitana ny toeran'ny sehatra fanapahan-kevitra ireo solontenan'ny vohitra sady manara-maso ny rafitra, raha ireo komitin'ny vohitra kosa indray dia sehatra mpanatanteraka izay zara raha manana ny holazainy amin'ny fanapahana hevitra.
Andian-taranaka demaokratika vaovao ao Shina
Io andrana fifidianana miainga avy any ifotony io no nanjary mari-pamantarana manan-danja anehoana karazana demaokrasia vaovao iray ao Shina, izay antsoin'ny maro mihitsy aza hoe hetsiky ny demaokrasia vaovao avy eny ambanivohitra. Mpanara-maso iray ny fifidianana ao Wukan no nandrakitra fomba fisaina vitsivitsy ao amin'ny bilaoginy, avy amin'i Lin Zulian, mpandrindra iray ao an-toerana sady solotenan'ny vohitra vao voafidy teo :
Ity no fifidianana voalohany indrindra tato anatin'ny 40 taona. Fahiny, tsy mbola nisy mihitsy tena fifidianana izany tao Wukan ; notendren'ireo mpitarika Antoko hatrany izay ho solontenan'ny vohitra. Ho an'ny mponina, tena zava-baovao sy tsy mahazatra ny fifidianana. Amin'ity indray mitoraka ity, mahita afisy lehibe momba ny fifidianana miparitaka manerana ny tanàna isika; io no ahafahan'ireo mponina mahatakatra marina mikasika ny hoe inona ny fifidianana ary ahoana ny dingam-pifidianana tokony harahana.
Ireo manampahaizana fanta-bahoaka koa dia nanoritra ny dingam-pifidianana ao Wukan ho zava-baovao any Shina. Ilay mpanolotra fandaharana fanta-daza, Yuan Weidong, dia nanoratra hoe :
Nifidy ireo mpikambana 11 vaovao ao amin'ny komitim-pifidianana ireo mponin'i Wukan, tao anaty rafitra fifidianana tsy mitanila, mangarahara. Andian-taranaka demaokratika iray vaovao any amin'ireo vohitra Sinoa sy manerana ireo tanan-dehibe any Shina io. Ny tsy fitanilàna sy ny fangaraharàna no soatovina fototra anatinà fifidianana iray. Ny fiovàna ara-politika androany ao Wukan no hanova an'i Shina amin'ny hoavy.
Ireo olan'ny fifidianana tany aloha
Yuan koa dia mamintina ireo olana fototra telo lehibe izay nisy tamin'ireo fifidianana tao Shina nandritra ny taompolo maro :
Voalohany, ireo mpitarika ny antoko kaomionista dia manakorontana sy manodinkodina foana ny fifidianana tsirairay. Faharoa, ireo mpitarika ireo ihany no mbola mihevitra fa tsy manam-pahalalàna ireo mponina no sady tsy mendrika ny hifidy ny solotenany, amin'ny filazàna fa tsy mifandanja amin'ireo vohitra any Shina izany rafi-pifidianana demaokratika izany. Fahatelo, ireo mpitarika antoko dia manahy fandrao ho saro-pehezina ireo mponina, hahatonga fahasarotan'ny fampiharana ny sasantsasany amin'ny politikany.
Tao amin'ny Sina Weibo, Zhen Puhong, mpampiasa aterineto, dia nanontany raha tena manan-danja araka ny iheveran'ny maro azy tokoa ny fifidianana ao Wukan.
Raha araka ny lalàna Fandaminana ny vohitra, ireo fifidianana atao isam-bohitra any Shina dia tokony ho tantanany manokana sy hanana ny fahaleovantenany. Ny olana fototra dia hoe ireo mpirotsaka dia voaara-mason'ireo mpitarika antoko; mampiasa fomba tsy araka ny lalàna mihitsy aza ry zareo mba hanodinkodinana ny fifidianana. Faharoa, ireo raharaha isam-bohitra dia tantanina araka ny torolalan'ny sekreteran'ny fitantanana isam-bohitra, midika hoe ireo solotenan'ny tanàna dia, na tsy manana fahefana, na manjary mpiray tsikombakomba aminà kolikoly. Fahatelo, ao anatin'ny fifidianana ao Wukan, tahaka ny mbola mitana anjara toerana lehibe ny antoko amin'ny fametrahana ny tetiandrom-pifidianana. Ka ahoana araka izany no hanaporofoana fa manan-danja ity fifidianana ity?
Avy amin'ireo fanamarihana ao amin'ny lahatsoratr'i Zhen, ireo mpampiasa aterineto sasany dia nanoratra hoe :
Ny dikan'ny hoe fitantanana miahy tena dia tokony tsy hofehimpehezin'ny antoko ireo mponina eo am-bohitra. Raha tsy izany, na dia ohatra aza hoe voafidy izay solotenan'ny vohitra, dia tsy hanana fahefana izy, hahatonga ny fifidianana ho zavatra tsy ilaina akory.
Mandritra ny fifidianana demaokratika iray, zavatra mavesa-danja ny dingana tsy mitanila. Mavesa-danja ihany koa ny fahaiza-mitarika , na eo aza izany, mba hiantohana ny demaokrasia; ny singa tena mamaritra azy dia ny fibahanana na iza na iza tsy hanitsakitsaka ny dingana ara-pitantanana.
Ny tandindon'i Wukan any Zhejiang
Wukan, navela hifidy ireo mpitarika azy, dia efa mety hanana sahady ny dindony amin'ny fankaherezana ireo vohitra hafa any atsimo mba haka tàhaka ny lasitra Wukan.
Ao amin'ny faritanin'i Zhejiang, na ireo mponina any atsinanana, na ny avy any andrefana any amin'ny vohitr'i Panhe ao an-tananan'i Wenzhou dia samy naka aim-panahy avy amin'ny fitroarana tao Wukan avokoa ka lasa ho ny vohitra faharoa tonga tamin'ny fanesorana ny manampahefana tao an-toerana. Ireo mponiina 5.000 avy ao Panhe dia nanao nihetsika hanohitra ny fakàna tsy ara-dalàna ny tany nanomboka tamin'ny 1 Febroary taorian'ny famarotàna ‘ara-dalàna’ nataon'ny governemanta, tsy nisy fampilazana mialoha, ny ampahany amin'ny tanin-dry zareo. Araka ny tatitra, ireo tany famokarana rehetra namidin'ny solotenan'ny vohitr'i Panhe hatramin'ny 2006 dia tsy nisy fanonerana na kely aza ho an'ireo tantsaha sy mponina teo am-bohitra tokony hanan-jo amin'izany.
Avy amin'ireo dinidinika momba an'i Panhe ao amin'ny Sina Weibo:
Naka ohatra tamin'ny Lasitra Wukan, dia miàla any ny fitantanana mahaleotenan'ny vohitr'i Panhe. Efa tsinjo sy tsy azo ihodivirana io fironana manerantany io eto amin'ny firenentsika.
Koa satria nahavita namaha samy irery ny olana momba ny taniny ny vohitr'i Wukan ao Guangdong, ankehitriny ao Zhejiang, Wukan iray hafa— vohitr'i Panhe— no nipoaka koa. Be izao ireo fifandirana sy olana anatiny.
Betsaka hetsi-panoherana mitranga ao Shina isan'andro.
Mba hanaovana indray mijery ny fomba fijery ofisialy an'ireo fivoarana demaokratika ireo, Niu Wenyuan ao amin'ny Filankevi-panjakana Sinoa, dia nambara ho nilaza tanaty seminary iray natao tao Guangzhou tany ampiandohan'ity volana ity hoe :
Tamin'ny 2011, 500 teo ho eo ny salanisan'ny “hetsika itambarambe” tahaka ny hetsi-panoherana, korontana sy savoritaka sosialy tao Sina isan'andro. Midika io fa mitontongana ny rindra sy ny fenitra sosialy
ary mora andairan'ny fanakorontanan-tsaina ny vahoaka.